people Nepal » निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’ निगरानीमा : को–को छन् सूचीमा ? निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’ निगरानीमा : को–को छन् सूचीमा ? – people Nepal
निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’ निगरानीमा : को–को छन् सूचीमा ?
बैशाख २३, काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’हरूको सूची बनाएर प्रहरीले उनीहरूमाथि निगरानी सुरु गरेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूको सूची नै पठाएर निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रहरीले पछिल्लो दुई महिनामा ३२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तेजेन्द्र गुरुङ, साजन महर्जन, वाला लामा, दीपेन्द्र प्याकुरेल ‘कान्छा’ लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । त्यस्तै, नमु तामाङ, कुमार गोले, सविन खड्गी, छिरिङ भनिने फुपु छिरिङ शेर्पा, बसन्त भुषाल, आशिष राई, कृष्ण खड्का, मम भनिने रामकृष्ण थापा, बिक्रम भनिने नानीबाबु थापा, रकी भनिने सागर थापा मगर, शशांक भनिने शिसन श्रेष्ठ पनि पक्राउ परिसकेका छन् । यसैगरी, पुनम कार्की, कर्मा घले, कोर्ते गुरुङ, ज्याक गुरुङ, दुर्गा राई, रिज महर्जन, राजीव महर्जन, निरु लामा, राजु बोगटी, पुनित गुरुङ, रामेश्वर गौतम,‘फिस्टे’, श्याम मोक्तान, काले थापा मगर, सुनिल नगरकोटी, नकिन महर्जन र सुरेश जोशी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश साधारण धरौटीमा छुटिसकेका छन् । गोंगबुका गुन्डा नाइके साजन १५ वैशाखमा पक्राउ परेकोमा तेस्रो दिनमै छुटेका थिए । गुन्डागर्दीसम्बन्धी कानुन नभएकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराध चलाउनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साधरण धरौटीमै छाड्ने गरेको छ । निर्वाचनमा नेत्रविक्रम नेतृत्वको नेकपा र गुन्डाहरूलाई उपत्यकाका प्रमुख सुरक्षा चुनौती बनाएर सुरक्षा योजना बनाएको छ ।